GUODA Inc mgbe niile
Iji meziwanye ikike anyị nwere ime ihe ọhụrụ, GUODA ga-esonye na ngosi ngosi na-agbanwe agbanwe ma n'ụlọ ma n'ụgbọ. Ebumnuche bụ isi nke GUODA Inc. na-aga ụwa niile. Ya mere, anyị anọwo na-ekere òkè na mmemme zuru ụwa ọnụ na afọ ole na ole gara aga. Na-atụ anya na a pụrụ ịhụ ịnyịnya ígwè anyị ndị mara mma, na sam ...
Kwadebe ihe ngosi Canton
Izu gara aga Guoda Tianjin Inc.Marketing ngalaba akwadebewo maka The mbụ online Export Fair si.Wwetara ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị iji wepụta ngwaahịa iwebata vidiyo.Ma ka ọ dị ugbu a, anyị dekọtara usoro mmepụta ngwaahịa ahụ yana ndekọ nke ọtụtụ ụgbọ ala ndị ọhụrụ na ngwa nke ahụ mere se ...
Izu gara aga Guoda Tianjin Inc.Marketing ngalaba akwadebewo maka The mbụ online Export Fair si.Wwetara ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị iji wepụta ngwaahịa iwebata vidiyo.Ma ka ọ dị ugbu a, anyị dekọtara usoro mmepụta ngwaahịa ahụ yana ndekọ nke ọtụtụ ụgbọ ala ndị ọhụrụ na ngwa nke ahụ kwa ...
Choputa Market na Innovation GUODA Inc Mgbe niile n’ onzọ
Iji meziwanye ikike anyị nwere ime ihe ọhụrụ, GUODA ga-esonye na ngosi ngosi na-agbanwe agbanwe ma n'ụlọ ma n'ụgbọ. Ebumnuche bụ isi nke GUODA Inc. na-aga ụwa niile. Ya mere, anyị anọwo na-ekere òkè na mmemme zuru ụwa ọnụ na afọ ole na ole gara aga. Na-enwe olileanya na anyị magburu onwe ịnyịnya ígwè nwere ike ịbụ se ...
Na nso nso a, igwe ụmụaka GUODA na-ere ọkụ na ndịda ọwụwa anyanwụ Asia. Ọtụtụ ndị ahịa na-ahọrọ ọtụtụ ngwaahịa anyị, dị ka igwe kwụ otu ebe ụmụaka, igwe kwụ otu ebe ụmụaka na igwe kwụ otu ebe na wiilị ọzụzụ, ọkachasị ụmụaka nwere ụkwụ atọ. Ọtụtụ ndị ahịa anyị, ha na-ahọrọ ịhọrọ differen ...
Nabata na GUODA
Nabata na ụlọ ọrụ GUODA (Tianjin) Science and Technology Development Incorporated Company! Kemgbe 2007, anyị na-agba mbọ imeghe ọkachamara factory nke electric anyịnya igwe mmepụta. Na 2014, GUODA guzobere eze ma dị na Tianjin, nke kachasị ...
Ozi Ọma ——Anya A Na-agba n’Anya
Anyị na-emeghe weebụ iji gosi ụlọ ọrụ anyị ma wetara gị ngwaahịa anyị, igwe, igwe eletriki igwe eletriki na tricycle, ọgba tum tum na skuuta, ụmụaka ịnyịnya na ụmụaka na-eweta. N’afọ 2020, ahịa igwe na-aga n’ihu. Dị ka ahịa si chọọ, anyị malitekwara ire akụkụ. Nye ngwaahia ...
Gosiputara gi n’igwe ahia anyi ——Enya igwe
Dị ka ụlọ ọrụ na-emepụta e-igwe kwụ otu ebe, ịnwe njikwa dị oke mkpa dị ezigbo mkpa. Nke mbụ, ndị ọrụ anyị na-elele okpokoro igwe kwụ otu ebe. Mgbe ahụ ka a na-edozi okirikiri igwe eletrik na-arụ ọrụ nke ọma na ntọala na-agbanwe agbanwe na workbench na mmanu na-etinye ya na nkwonkwo ya niile. ...